Ajụjụ - Spieth (Xiamen) Technology Co., Ltd.
Ee, anyị na-achọ mba nile iwu ka nwere na-aga n'ihu kacha nta iji ibu. Ọ bụrụ na ị na-achọ ka resell ma na dị nta quantities, anyị nwere ike ikwu na ị na-amụba gị ibu iru anyị kacha mma price.
n'ihi na samples
The ụzọ oge bụ banyere 7 ụbọchị onwe maka ụgwọ na naanị ikwu maka ibu na-eri.
N'ihi na uka mmepụta
The ụzọ oge bụ 20-30 ụbọchị mgbe na-anata ego ugwo. The ụzọ ụfọdụ, irè mgbe (1) anyị natara gị ego, na (2) anyị nwere ikpeazụ unu ihu ọma gị ngwaahịa. Ọ bụrụ na anyị ụzọ ụfọdụ na-adịghị arụ ọrụ na gị n'obi imecha, biko gaa n'elu gị chọrọ na gị ire ere. N'ọnọdụ nile anyị ga-agbalị nabata gị mkpa. Ọtụtụ mgbe anyị na-enwe ike ime otú ahụ.
Ị nwere ike ime ka ugwo ka anyị akụ na akaụntụ, T / T, L / C:
Anyị akwụkwọ ikike anyị egwu NA SHELVING maka 5-Years Ewezuga na-ezighị ezi mmadụ ọrụ.
Anyị nkwa bụ gị afọ ojuju na anyị na. Na akwụkwọ ikike ma ọ bụ, na ọ bụ omenala nke anyị ụlọ ọrụ na adreesị na-edozi ihe niile ahịa mbipụta ka onye ọ bụla nwere obi ụtọ
Olee otú m pụrụ wụnye racks?
Anyị na-enye akowaputara wụnye ntụziaka maka ụdị shelf. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị na-enye ndị injinia videos maka free.
Olee otú m ga-esi ngwa ngwa e kwuru?
(1) The size nke nkwakọba?
(2) pallet ogbe akụkụ: Elu * Omimi * Ogologo?
(3) Olee otú ọtụtụ ndị n'ígwé?
(4) Loading ike nke ọ bụla larịị? (Ọ bụrụ na o kwere omume, i nwere ike jiri obiọma na-agwa m ihe ngwá ahịa gị bụ?)
(5) The Ral agba?
(6) Olee otú ọtụtụ ndị bays (tent)?
nkwakọba Nchekwa racks , pallet egwu uprights , pallet egwu nchebe , foldable waya ntupu akpa , nkwakọba pallet ogbe , nkwakọba pallet egwu System ,